TOMPONANDRAIKITRA AMIN’NY FATY OLONA ANY ATSIMO RAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
Nanao tatitra ny dian’ireo delegasiona nihaona tamin’ny filoha Ravalomanana tany Afrika Atsimo, tamin’ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra ny faran’ny herinandro teo. Nambarany tamin’izany fa ny Alatsinainy ireo delegasiona no nanainga ary niverina ny Alarobia rehefa avy nihaona tamin’ny filoha Ravalomanana. Mazava hoy Me Hanitra ny fanapahan-kevitry ny Sadc tany Maputo fa tsy maintsy mody Ravalomanana. Samy nanaiky ny datim-pifidianana navoakan’ny Cenit hoy izy Ravalomanana sy Rajoelina. Nanaiky ihany koa ny fampiharana ny andininy faha 20 sy 45 ao amin’ny tondrozotra Rajoelina. Ny mahagaga hoy izy dia rehefa tonga aty Madagasikara dia ireo namany no mivovo. Mikasika ny fisian’ny fisavana ireo delegasiona nataon’ny miaramila teny Ivato dia nambarany fa efa marary saina ireo satria matahotra ny filoha Ravalomanana. Izahay hoy Me Hanitra tsy hamaly ny fihantsiana izay nataony. Ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana hoy izy dia tsy zakanareo. Ny allez no anareo fa ny retour antsika. Nanafatra anay ihany koa i dada hoy izy ny hoe lazao ny vahoaka fa izaho tsy maintsy mody, tsy misy intsony ny sakana tsy ahafahako mody. Ho avy aty amin’ny herinandro ho avy io, ireo iraka mpanao tombana avy amin’ny Sadc ka asehontsika azy ireo ny herintsika. Nilaza ny filoha Ravalomanana hoy Me Hanitra, fa isika dia mahatoky ny Troika tanteraka. Tsy manaiky ho ohatra ratsy aty Afrika hoy ity olomboantendry ity, ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena eo anivon’ny Sadc, fa tsy maintsy fifidianana malalaka sy demokratika no atao. Momba ny antoko Tim kosa dia nambarany fa noho ny fanapahan-kevitra tany Maputo dia afaka milatsaka ny filoha Ravalomanana. Noho izany dia amin’ny anaran’ny antoko Tim no ahafahany manao izany. Tsy mampihemotra antsika hoy ity mpanao politika ity, ny filazan’ny sasany tato ato fa izy no mitondra ny antoko Tim. Ny kongresy nasionaly izay nataonareo hoy izy dia tsikombakomba niarahana tamin’ny fat, mba hahafahanareo miditra ao anaty fitondrana. Varotanareo izahay mpitolona niandry an’i dada hoy izy, kanefa tsy mahasaka ny filoha Ravalomananan tsy hilatsaka izany. Mahakasika ny asa dahalo any Atsimo dia nambaran’ny Me Hanitra, fa iza amintsika no sahy hijoro vavolombelona fa tena malaso ireo novonina ireo. N’inon’inona hoy izy dia rà malagasy no latsaka tany. Mampalahelo ireo miaramila ireo satria ireny no lasibatra mijinja ny tombontsoan’ny lehibe. Ireo miaramila eto andrenivohitra hoy izy no mahazo tombontsoa. Mandehana mankany ianareo miaramila be dia be ireo. Nanenjehina ny filoha Ravalomanana hoy Hanitra ny raharaha 07 febroary, izay lazaina fa tsy izy no namono olona, fa amin’ny maha filoha faratampon’ny foloalindahy azy. Araka ny teninao ry Rajoelina dia ianao izao no filoha faratampon’ny foloalindahy ka ianao izany no tomponandraikitra amin’ireo fatin’olona ireo. Atao tsinontsinona ny rà latsaka any Atsimo.
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 septembre 2012 11 septembre 2012 Catégories Politique
1 pensée sur “TOMPONANDRAIKITRA AMIN’NY FATY OLONA ANY ATSIMO RAJOELINA”
misaotra nareo ao namana rehetra @ mangro fa de manohana tohizo ny tolona marina ny anao mè hanitra fa i lavanify ny tomponatoka @ fatiolona any amysimo ary toiny nanaovany ny teo ambohitsirohitra de eo mody atao hoe ravalo tsy marina ravalo olona driamanitra fa tsy dj manampy adravalo sy ny tariny manohana ny tim fa tia tanindrazana ny nmarina tsy mba maty tsy maitsy mandresy ravalo
Précédent Article précédent : Eliane NAIKA 2012-09-11 17:32:00
Suivant Article suivant : FANJAKANA MPANDROBA NO NAJORON-DRAJOELINA ETO